Magacyada 5 Tababare Oo U Sharraxan Beddelka Ancelotti
HomeSuuqaMagacyada 5 Tababare Oo U Sharraxan Beddelka Ancelotti
Real Madrid ayaa hoosta ku haysata liis ay ko qoran yihiin magacyada tababareyaal beddel u noqon doona tababare Carlo Ancelotti oo laga yaabo in uu ka tago kooxdiisa bisha June.
Liiskan oo ay ku qoran yihiin tababareyaal caan ah, rag ku cusub saaxadda tababareyaasha iyo kuwo ay adag tahay in ay helaan.
Zidane: ma laha khibrad badan oo tababarenimo, haddana waa musharraxa ugu horreeya. Waa tababaraha kooxda heerka labaad ee Real Madrid ee loo yaqaano Castilla, wali muu qaadanin liisanka tababarenimo, waxase la rajeynayaa in bisha May ay UEFA siiso liiska. Zidane da’diisu waa 42 jir, si fiican ayaanu u yaqaanaa kooxdaas iyadoo ay waliba u dheer tahay in uu sannadkii hore ahaa tababare ku-xigeenka Ancelotti markaas oo ay Real Madrid ku guuleysatay Champions League.
Löw: Waxa la filayey in uu beddeli doono Jose Mourinho markii uu ka tegay Real Madrid, laakiin waxa meesha soo galay Ancelotti. Joachim Low oo ay da’diisu tahay 55 jir, waa tababaraha xulka qaranka Germany, waxase uu heshiiskiisu dhamaanayaa sannadka 2016, laakiin bil ka hor ayuu heshiiska kordhiyey, waxaanu saxeexay illaa 2018.
Klopp: dhowaan ayuu ku dhawaaqay inuu iska casilayo Borussia Dormund xagaaga, xasuusta u taalla Madrid-na waa guushii uu ka gaadhay Bernabeu ee ahayd 4-1 uu kaga badiyey Real Madrid isagoo wata Dortmund. Jurgen Klopp waa 47 jir, waxana ku tartamaya kooxo badan oo ay ugu horreyso Manchester United oo la filayo in uu beddelo Manuel Pellegrini.
Michel: Ixtiraam badan ayuu ku leeyahay Bernabeu Stadium, shaqana muu haynin illaa bishii January markii laga caydhiyey Olympiacos. Da’diisu waa 52 jir. waxa uu ka mid ahaa ciyaartooyadii muddada badan usoo ciyaaray kooxda, waxa uu u ciyaaray 560 kulan, waxaanu u dhaliyey 129 gool. Intii u dhaxaysay 1984 illaa 1996, kadibna waxa uu noqday tababaraha kooxda heerka labaad. Waxa kale oo uu tababare u noqday Getafe iyo Sevilla.
Benitez: taageero ayuu ka haystaa madaxda sare ee maamulka Real Madrid. Heshiiska uu kula jiro Napoli waxa uu dhamaanayaa dhamaadka bisha June. Xidhiidhka u dhexeeya madaxweynaha Napoli ee Aurelio De Laurentiis ma fiicna, kooxdiisuna kaalinta afraad ayey ka fadhidaa tartanka kala horreynta kooxaha Serie A, horena waxa uu u shaaciyey in aanu sii wadi doonin shaqada tababarenimo ee Napoli. Rafael Benitez da’diisu waa 55 jir, waxa uu taageero ka haystaa agaasimaha guud ee Real Madrid ee Jose Angel Sanchez. Taariikhdiisa ciyaareed way fiican tahay, waxa uu ku guuleystay hal mar Champions League, 2 Europa League ah, 1 European Super Cup iyo 2 La Liga, 1 FA Cup, 2 Italian Supercups Iyo 1 Italian Cup.
Zidane: ‘Ciyaar Adag ayaa Noo Hadhay’
Man City 1-2 Man United – all goals and highlights
Didier Drogba Oo Loo Xidhay No. 11 & Oscar Oo Loogu Bedelay No. 8